Bogga Ciyaaraha, 29 August 2019
Khamiis 29 August 2019
Wararka Ciyaaraha: Algeria vs Senegal
Wararki ugu danbeeyay ee ciyaaraha waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Minnesota Maxmuud Mascadde.
Mareykanka oo ku guuleystay Koobka Adduunka ee Dumarka
Xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka ayaa maanta oo Axad ah ku guuleystay Koobka Aduunka ee Dumarka, kaddib marki ay 2-0 uga badiyeen dhiggooda Holland, ciyaarti kama daneysta aheyd
Cayaaro ka tirsan koobka Qaramada Afrika oo dhacay
Masar: Tartanka K. Cagta Afrika oo Furmay
Kadib xafladdii furintaanka, waxaa wada ciyaaray xulka tartanka marti galinaya ee Masar iyo xulka Zimbabwe, iyada oo natiijadii ciyaartuna ay ku dhamaatay 1-0 ay guushu ku raacday dalka Masar
Sarri oo Laga Dhigay Macallinka Juventus
Kooxda Juventus ayaa maanta ku dhawaaqday in ay macallinki hore ee kooxaha Chelsea iyo Napoli Maurizio Sarri ay u magacwday tabaraheeda saddexda sano ee soo socota.
Maradona oo Ka tagaya Mexico
Diego Maradona ayaa ka tagay kooxda kubadda cagta Dorados de Sinalao ee dalka Mexico sababo dhinaca caafimaadka ah.
Real Madrid oo keentay Messi-ga Japan
Kooxda Real Madrid ayaa maanta oo Jimca ah ku dhawaaqday in ay soo iibsatay ciyaaryahan Takefusa Kubo oo ay dadka ku naaneesaan Messi-ga dalka Japan.
Toronto Raptors oo hanatay koobka NBA-da
Kooxda kubadda koleyga Toronto Raptors ee dalka Canada ayaa marki ugu horreysay taariikhdeeda ku guuleysatay koobka kubadda koleyga NBA-da ee Waqooyiga America, kaddib marki ay 114-110 dhibcood ku garaacday kooxda caanka ah ee Golden State Warriors ee dalka Mareykanka.
Liverpool oo qaadday Koobka UCL
Kooxda Liverpool ee dalka Talyaaniga ayaa xalay ku guuleysatay koobka Naadiyada Horyaalada Yurub ee Uefa Champions League, kaddib marki ay ciyaarti kama danbeysta aheyd 2-0 ku garaacday kooxda Tottenham.
Tababare Gattuso oo Ka Tagay AC Milan
Kooxda kubadda cagta AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa xaqiijisay Talaadadi maanta, in uu shaqada ka tagay macallin Gennaro Gattuso, kaddib 18 bilood oo uu kooxda leylinayay.
Xavi oo Tababare Noqday
Laacibki hore ee khadka dhexe ee Barcelona iyo xulka Spain Xavi Hernandez ayaa maanta loo magacaabay tababaraha cusub ee kooxda Al Sadd ee dalka Qatar.
Bayern Munich oo Hanatay Horyaalka Jarmalka
Kooxda Bayern Munich ayaa markeedii todobaad oo xiriir ah maanta hanatay horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesliga, ka gadaal marki ay ciyaarteedi ugu danbeysay ee xilli ciyaareedkan 5-1 ku garaacday Eintracht Frankfurt.